छवि एसईओ को कला - Semalt विशेषज्ञ द्वारा सरल सुझावहरु
चित्र र भिडियोहरू जैविक यातायात र खोज इञ्जिन अनुकूलनको लागि सम्पत्ति हुन्, तर दुर्भाग्यवस, तिनीहरू प्राय: बेवास्ता गरिन्छन्। यो भन्न सुरक्षित छ कि छविहरूले अधिक यातायात ड्राइभ गर्दछ र तपाईंको साइटको खोज इञ्जिन स्तर निर्धारण गर्दछ। त्यहाँ छवि अप्टिमाइजेसनको केहि आयामहरू छन् जुन गुगल परिणामहरूमा राम्रो प्लेसमेन्ट, उत्तम प्रयोगकर्ता अनुभवको लागि अनुकूलन, र सामाजिक मिडिया साझेदारी धेरै प्राप्त गर्नका लागि अनुकूलन समावेश गर्दछ। छवि अप्टिमाइजेसनका लागि तपाईले यूआरएल संरचना, वर्णनात्मक ट्यागहरू र ए text्कर पाठको बारे सोच्नु पर्छ। यहाँ छवटा सुझावहरू छन् एसईओ एसईओ मा लिजा मिशेल, Semalt ग्राहक सफलता प्रबन्धक द्वारा तैयार।
१. सही चित्रहरू खोज्नुहोस्:
सही प्रकारका छविहरू खोज्नु महत्त्वपूर्ण छ। उच्च-गुणवत्ता छविहरूले तपाईंको लेखहरू वा वेब पृष्ठहरूमा मूल्य र आयामहरू थप्दछ। यसका साथै, यसले मानिसहरूलाई तपाईंको सामग्री साझेदारी गर्न र गुणस्तर ब्याकलिंकहरू प्रदान गर्न प्रोत्साहित गर्दछ। तपाईले उपयुक्त चित्रहरू फ्लिकर, iStockPhoto, Shutterstock र गेट्टी छविहरूमा फेला पार्न सक्नुहुनेछ। फ्लिकर सायद सब भन्दा राम्रो र व्यापक प्रयोग सेवा नि: शुल्क फोटोहरू खोज्नका लागि हो। यहाँ तपाईं फोटोग्राफहरूको ठूलो संख्यामा पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ र धेरै छविहरू डाउनलोड गर्नुहोस् जुन तपाईं चाहनुहुन्छ। आईस्टकफोटो र शटरस्टकसँग स्टक छविहरूको ठूलो संग्रह छ। ती फोटोहरूमा पहुँच पाउन तपाईं यी सेवाहरूको सदस्यता लिन सक्नुहुनेछ।
२. तपाईको फाइलनाममा कुञ्जी शब्द प्रयोग गर्नुहोस्।
जस्तो तपाईले पोष्ट वा विशेष पृष्ठ वर्णन गर्न यूआरएल प्रयोग गर्नुहुन्छ, तपाईले आफ्नो फाइलनाममा कुञ्जी शब्द प्रयोग गर्नुपर्दछ। निश्चित गर्नुहोस् कि प्राथमिक कुञ्जी शब्द तपाईको छविको फाइल नामको रूपमा प्रयोग भएको छ। यो iStock_0004221245XSmall.jpg जस्तो हुनु हुँदैन किनभने त्यस्ता फाईलनामहरूले तपाईंको सामग्रीको बारेमा जानकारी थप गर्दैन। यसको सट्टामा, तपाईंले छवि-optization.jpg मा पुन: नामकरण गर्नुपर्नेछ।
Des. वर्णनात्मक Alt पाठ सिर्जना गर्नुहोस्:
वर्णनात्मक Alt पाठ वा Alt ट्यागहरू सिर्जना गर्न महत्त्वपूर्ण छ। यसले गुगल, बिंग, र याहू तपाईंको तस्वीरहरूको बारेमा निर्धारण गर्न मद्दत गर्दछ। परम्परागत सामग्री विपरीत, खोज इञ्जिनहरूले तपाईंको छविहरूको पाठ मूल्यांकन गर्न सक्दैन जब सम्म तपाईंले उचित Alt पाठ सम्मिलित गर्नुहुन्न।
The. ए The्कर पाठ:
एch्कर पाठ छवि एसईओ को एक महत्वपूर्ण कारक हो। यदि तपाईं एक लेखमा बहु छविहरू प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने, निश्चित गर्नुहोस् कि एन्कर पाठहरू सबैमा राम्रोसँग थपिएको छ। तपाईंको चित्रण वर्णन गर्न वर्णित एch्कर पाठ प्रयोग गर्नुहोस्। विचार गर्नुपर्ने अर्को आवश्यक कुरा यो हो कि तपाईंले आफ्ना चित्रहरूको वर्णनमा प्राथमिक कुञ्जी शब्द प्रयोग गर्नुपर्दछ। त्यहाँ जेनेरिक शर्तहरु को उपयोग गर्न को आवश्यकता छैन जुन तपाइँको सामग्री को अर्थ संग मिल्दैन। खोजशब्दहरूले मद्दत गर्ने खोजी ईन्जिनहरूले तपाईंको सामग्रीको प्रकृति र तपाईंले प्रयोग गर्नुभएको छविहरूको प्रकार मूल्या evalu्कन गर्दछ।
The. छविहरू तपाइँको सामग्रीसँग मिल्नु पर्छ:
तपाईंको तस्वीर वरपरका सामग्री छवि यूआरएल, एch्कर ट्यागहरू, र वैकल्पिक पाठमा सान्दर्भिक हुनुपर्दछ। साथै, तपाईले आफ्नो सामग्री र छवि दुबै प al्क्तिबद्ध गर्नुपर्दछ अधिक र अधिक व्यक्तिहरूलाई संलग्न गर्न। यसले खोजी ईन्जिनहरूले यो पुष्टि गर्न मद्दत गर्दछ कि तपाईं स्प्याम खोजिरहनु भएको छैन र छविहरू सान्दर्भिक र उच्च गुणस्तरका छन्।
6. सामानहरू नगर्नुहोस्:
यो सबै प्रकारको खोज इञ्जिन अनुकूलनको लागि जान्छ, तर हामी स्पष्टताको लागि भन्नेछौं: तपाईंले छवि ALT पाठ भर्नको लागि कुञ्जी शव्दहरू भर्नुहुन्न। यसको सट्टामा, तपाइँको Alt टेक्स्ट, क्याप्शन, र फाइलनाम वर्णनात्मक, बृहत् र छोटो हुनुपर्दछ। तपाईंले छविहरू एक तरिकाले अप्टिमाइज गर्नुपर्नेछ कि अधिक र अधिक प्रयोगकर्ताहरू व्यस्त रहनेछन्, तपाईंलाई राम्रो खोज इञ्जिन स्तर निर्धारण प्राप्त गर्दै ।